स्वास्थ्य मन्त्रीमा गिरिराजमणी पोखरेल – जनस्वास्थ्य खबर
स्वास्थ्य मन्त्रीमा गिरिराजमणी पोखरेल
काठमाडौँ, १२ साउन । गिरिराजमणी पोखरेल ले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण क्रममा उनले स्वास्थ्य संविधानमै मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएकाले जनतालाई त्यसको अनुभूति गराउनु आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताए। उनले यसका लागि नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउने जानकारी गराए। ‘हामी संघीयतामा गएका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। त्यसअनुसार स्वास्थ्यका काम र अधिकार पनि बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री पाखरेलले भने, ‘पहिले हामी सरुवा रोगमा आधारित रणनीति बनाउँथ्यौं। अहिले नेपाली समाजमा नसर्ने रोगको चाप बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको हालै एउटा तथ्यांक पढेको थिएँ। त्यसैले नयाँ चुनौतीसँग जुध्न नयाँ नीति ल्याइनेछ।’
उनले स्वास्थ्यका निशुल्क कार्यक्रम, आधारभुत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम तथा भुकम्प पछि पुर्ननिर्माणको पालो पर्खेर बसेका स्वास्थ्यसंस्था तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत हुने बताए ।
आफूले मन्त्री बन्नुअघि डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको जानकारी पाएको बताउँदै डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विगतका कार्यकालमा पनि आफूले स्वास्थ्यमा कर्मचारीको सहयोग पाएको भन्दै यसपटक पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए । सो अवसरमा बोल्दै निमित्त स्वाथ्य सचिव डा विनोद श्रेष्ठले अनुभवी र स्वास्थ्यमा नाम राखिसकेको मन्त्री भएकोले आफूहरु ढुक्क रहेको भन्दै साथ दिन तयार भएको बताए ।